Paperpublished | Sima Pari
Home / PaperPublished
अस्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा महँगो भएको छ। त्यहाँको सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई विगतमा दिँदै आएको अनुदान रकम यो वर्षको बजेटबाट कटौती गरेपछि शिक्षा महँगो हुन लागेको हो। जानकारहरूका अनुसार अस्ट्रेलियन सरकारको यो निर्णयबाट अब उच्च शिक्षा हासिल गर्न अस्ट्रेलिया जाने नेपालीलगायत विदेशी विद्यार्थी पनि प्रभावित हुनेछन्। यसअघि सरकारले आफ्नो बजेटको निश्चित रकम उच्च शिक्षाको लागि छुट्ट्याउने गथ्र्यो। जसले गर्दा सरकारी अनुदान लिएर विश्वविद्यालय ... Read More »
भारतको आगामी प्रधानमन्त्रीको म्यान्डेट प्राप्त गरिसकेका भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदीलाई शनिबार दिउँसो नयाँ दिल्लीमा भव्य स्वागत गरिएको छ। रतीय जनता पार्टीले प्राप्त गरेको विजयको विजयोत्सवका लागि उनी राजधानी नयाँ दिल्ली गएका हुन्। उनले आगामी सरकार निर्माणमा स्पष्ट बहुमत हासिल गरेकोमा विश्वका नेताहरुले बधाई दिइरहेका छन्। उनलाई भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले पनि हिजो नै बधाई दिएका थिए। उनले ... Read More »
ठूलो संख्यामा युवा रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेका बेला विराटनगरका एक युवा भने अस्ट्रेलियाको स्थायी बसाइ अनुमति (पीआर) त्यागेर कृषि फार्म सञ्चालनमा रमाएका छन्। ६ वर्षसम्म अस्ट्रेलिया बसेका विराटनगर १५ निवासी सृजन प्याकुरेलले मोरङको टंकीसिनवारीमा कृषि फार्म सञ्चालन गरिरहेका छन्। सोह्र बिघा जग्गा भाडामा लिएर सुरु गरेको फार्ममा माछापोखरी, हाँस, कुखुरा, बाख्रा र गाई पालिएका छन्। उनले यो कार्य गत ... Read More »
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले नेकपा–माओवादीले बहिष्कारका नाममा कांग्रेसलाई भोट बेचेकाले आफ्नो पार्टी गत चुनावमा पहिलो हुन नसकेको बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपालको राष्ट्रिय भेलालाई शनिबार ललितपुरमा सम्बोधन गर्दै खनालले माओवादीले देशव्यापी रूपमा पैसा लिएर कांग्रेसलाई भोट दिएको आरोप लगाएका हुन् । केही ठाउँमा आन्तरिक कारणले चुनाव हारेको उनको भनाइ थियो । ‘केही निश्चित जित हुने क्षेत्रमा पनि आफ्नै व्यवस्थापकीय ... Read More »
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय थप आधुनिक बनाउँदै नयाँ र दक्ष कर्मचारीलाई क्रमश: प्रमुख जिल्ला बनाउन गृहकार्य भइरहेको जानकारी पनि दिए। गृह मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री गौतमले उक्त जानकारी दिएका हुन्। उनले अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले लापरबाही गरेका कारण उनीहरूमाथि कारबाही गरिएको बताए। सुरक्षा ... Read More »
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा संसदीय दलको नेता चयनका लागि भएको निर्वाचनमा आफूलाई हराउन राष्ट्रपति रामवरण यादवले ‘लबिङ’ गरेको भन्दै रुष्ट भएका छन्। देउवापक्षीय नेताहरूले तटस्थ बस्नुपर्ने मर्यादित पदमा बहाल रहँदा पनि राष्ट्रपतिले पार्टीभित्र एउटा उम्मेदवारका पक्षमा लागी भोट मागेर मर्यादा नाघेको आरोप लगाएका छन्। देउवापक्षीय नेताहरूको सोमबार बसेको चुनाउ समीक्षा बैठकले राष्ट्रपतिले धनुषा, महोत्तरी, सिराहालगायत तराईका सभासद्लाई शीतलनिवासमै बोलाएर ... Read More »
१८ वर्षदेखि अस्ट्रेलिया बस्दै आएका शेष घले विदेशमा थातथलो बनाएका नेपालीहरूको संगठन गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष छन् । अस्ट्रेलियामा शिक्षा र सपिङ मल क्षेत्रमा लगानी गरेका घले आक्कलझुकल नेपाल आउने जाउने गर्थे । एनआरएनए अध्यक्ष भएपछि भने महिनैपिच्छे नेपाल–अस्ट्रेलिया गरिरहेका छन् । प्रस्तुत छ, घलेसँग मोबाइल प्रयोगका अनुभवबारे गरिएको संवाद : सुरुमा कुन मोबाइल प्रयोग गर्नुभएको थियो ? नोकियाको ... Read More »
नेपाली कांगे्रसका सभापति सुशील कोइराला र एमाले नेता माधव नेपालबीचको एउटा भेटघाट (करिब १० दिनअघि) मा स्वभाविकरुपमा सत्ताको प्रसंग उठ्नु आश्चर्यको कुरा भएन। आफ्नो पक्ष्ँ या नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न कोइरालाले राखेको आग्रहमा माधव नेपालको उत्तर थियो, हामी त तपार्इंलाई एक महिनाअघिदेखि प्रधानमन्त्री मान्दै आएका छौं, तपाई तयार त हुनुहोस्। त्यसमा सच्चाई र व्यंग्य अनि कोइरालाको निरीहताप्रति कटाक्ष थियो। नेपालको भनाइमा ... Read More »
एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिवेदनमै नेताद्वय बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठको आलोचना गरेका छन्। ‘पार्टीमा नोकरशाही केन्द्रीयता, आम अराजकता र आर्थिक प्रदुषण’ देखिएको भन्दै दाहालले आत्मसमीक्षा थालेका हुन्। भट्टराईले निर्वाचनका बेला उपाध्यक्ष पदबाट त्यागपत्र दिएको घोषणा गरी पार्टीलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याएको आरोप दाहालको छ। श्रेष्ठको नाम उल्लेख नगरी तर सबै नेताले बुझ्ने भाषामा ‘पार्टी निर्णयविपरित सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पार्टीलाई कमजोर बनाएको’ ... Read More »